Su'aal: Jir xanuun iyo madax xanuun?
Author Topic: Su'aal: Jir xanuun iyo madax xanuun? (Read 4681 times)
« on: April 16, 2017, 09:42:55 PM »
Asalaaamu calaykum dhaqaatiirta salaan qaaali ah salaan kadib, waxaa i xanuuna jirka madaxa jirkayga badankiis Waxuu yeeshay wax kuus kuusan ilaa naas ka bidix ku lee yahay dhaqtarka Waxay i dhaheen waaa baruur fadhida meesha Hada ka hor xitaaa mammogafi waaa la i saaray anooo naasaha ka shakisan Waxay idhaheen wax dhiba MA aragno.fadlan igu caawiya Waxaad awoodaan jazakallaaah khayr.
Re: Su'aal: Jir xanuun iyo madax xanuun?
« Reply #1 on: August 01, 2017, 08:58:46 PM »
Waa suuragal in waxa jirka ka buurbuuran ay yihiin dufan waxaana loo yaqaanaa "Lipoma" meelo badan oo jirka ka mid ah way ku samaysmi karaan, haddii ay jir xanuun la socdane waxaan kugula talin lahaa inaad iska baartid xanuunka cholesterol-ka iyo xanuunka thryoid-ka, badanaa dadka qaba labadaas xanuun waa lagu arkaa cilladaan, inkastoo ay jiraan cillado kale oo iyadane keena laakiin waraysiga yaa lagu kala sooci karaa.
Su'aal: Qof ka markii uu rabo in Madax looga istaago mxaa keeno?
Started by AshomBoard Qaybta Su'aalaha
Views: 2986 May 06, 2016, 09:51:18 PM
Su'aal: Madax xanuunka lala soo kaco hurdada kadib?
Views: 5385 October 19, 2016, 07:14:57 PM
Su'aal: Madax wareer madaxa oo culees iga saran yahay?
Started by Zakiyare555Board Qaybta Su'aalaha
Views: 6967 January 28, 2017, 10:02:23 PM
Noocyada Madax Xanuunka (Types of Headache)
Views: 97513 December 16, 2016, 08:35:28 AM
Su'aal: Waamaxay cudurka madax wayninka (shicirooti)?
Views: 5560 May 06, 2010, 01:10:28 PM